Gaari is qarxin loo diyaarinayay oo ku qarxay Shabaab(Xog-faahfaahsan) | KEYDMEDIA ONLINE
Gaari is qarxin loo diyaarinayay oo ku qarxay Shabaab(Xog-faahfaahsan)
JABUUTI(KEYDMEDIA) Sida ay ku waramayaan wararka aynu ka heleyno magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya gaar ahaan degmada Kaaraan waxaa shalay gabal dhicii halkaasi ku qarxay geeri ay kooxda shabaab u diyaarinayeen fal is qarxin ah oo laga fulin lahaa qeyba ka mid ah muqdisho gaar ahaan deegaanada ay dowlada ku sugantahay.
Qaraxa gaarigaasi ayaa waxaa ku geeriyooday todobo ka tirsan Al-shabaab kuwaasoo uu qeyb ka ahaa madaxii diyaarinta walxaha qaraxa ee kooxda Shabaab Qaasim Shariifow oo ah nin ka yimid Dalka Sweden isla markaana ay saaxibo dhaw ahaayeen Fu’aad Shonqole waxaana la aaminsanyahay inuu falal argagixiso kol hore fuliyay qeyba kale duwan oo dunida ka tirsan.
Dadka kale ee qaraxaasi ku geeriyooday waxaa ka mid ahaa ninkii is qarxinta loo diyaarinyay iyo waliba taliyihii Shabaab ee saldhiga degmada Kaaraan nin lagu magacaabi jiray Yuusuf liimaliimo.
Qaasim Shariifow ayaa kol hore waxaa ku qarxay isaga oo ku sugan degmada Afgooye ee gobalka Sh.hoose miino uu diyaarinayay waxaana qaraxaasi uu kaga go’ay farahiisa qaarkood.
Falkan is qarxinta ah ayaa lagu diyaarinayay guri ku yaala meel ku dhaw Saldhiga degmada kaaraan, waxaana qaraxa gaarigaasi xalay fiidkii si weyn looga dareemay gudaha magaalada Muqdisho.
Mr Shariifow ayaa ku noolaa degmada Afgooye gaar ahaan xaafadda Xaawa taako guri ku yaalay isagoona beer weyn ku lahaa halkaasi, sida dad xog-ogaal ah ay sheegeen waxa uu ehelkiisa iyo caruurtiisa uu booqan jiray maalmaha khamiista iyo jimcaha
Ma ahan markii ugu horeysay ee Alle uu gacmahooda ku dhibaateeyo kooxda Shabaab iyagoo qarax diyaarin ku jira, waxaana sanadkii tagay sidan oo kale ku qarxay kooxda gaari qarax ay ku diyaarinayeen degmada Wardhiigley ee gobalka Banaadir.
Dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn u hadal hayaa qaabka uu falkaasi uu u dhacay iyadoona dadka ay ku sheekeynayaa in ciqaabta alle ay la kulmeen Shabaab iyagoona alle ka baryay inuu umadda ka qabto dhibaatada Shababka.
Sidee u dhacday anisixinta Xukuumadda Rooble?
Warar 24 October 2020 14:36
Mudo dhowr maalmood ah waxay la-taliyeyaasha Farmaajo iyo kuwa xafiiskiisa ka shaqeeya ay wadeen halgan ku aadan ansixinta Xukuumadda, iyadoo loo sameeyay Xildhibaanada balan-qaadyo kala duwan.